Dhigso: Hooska ugu Qodobka badan si aad uga saartid boggaga internetka - Khabiirka cidhiidhiga ah
Webka qashin-saaridu waa habka xogta macdanta ama ururinta macluumaadka laga helo World Wide Web. Waxaa jira tiro badan oo xog ururin ah, laakiin Apify waa adeegga ugu saxsan oo awood leh.
Dhibaatada waa sawir gacmeed iyo barnaamijka otomaatiga - grain moisture measurement. Waxay ka koobantahay macluumaadka laga helo goobo kala duwan oo ku abaabulaya arrimo ah daqiiqado. Waxaad ururin kartaa oo dhisi kartaa xogta adigoo isticmaalaya qalabkan. Haddii aad rabto inaad ka tirtirto macluumaadka bogga fashion, Apify waxay diyaarin doontaa macluumaadka ku salaysan midabada, qiimayaasha iyo qiyaasta alaabta. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee hoos ku qoran:
1. Habka ugu fiican ee loo soo saaro bogga:
Apify, uma baahnid inaad abuurto dukumiintiyada gacanta. Qalabkani wuxuu si toos ah uugu dhejiyaa qoraallo ku qoran CRM-gaaga. Waxay isticmaashaa API-yada si ay xogta uga soo qaadato dhamaanba goobta. Kaxeysta wuxuu abuuraa xog tayo sare leh oo ku saabsan saadaasha hawada, qiimaha badeecada, iyo xeeladaha suuq-geynta. Waxa kale oo ay ku socotaa bogaggaaga bogagga waxayna hagaajineysaa darajooyinkaaga bogga.
2. Qof kasta oo ku haboon:
Apate wuxuu ku haboon yahay barnaamijyada, kuwa aan codka lahayn, ganacsatada, kuwa xorta ah, suxufiyiinta, shirkadaha websaydhka, shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexe, iyo falanqeeyayaasha macluumaadka. Arday ahaan, waxaad isticmaali kartaa Apify si aad u ururiso macluumaadka mashaariicda cilmi-baarista. Boggan shabakadda bogga r wuxuu u fiican yahay labada bilawga iyo sheyda ugu sarreeya. Waxay naga caawinaysaa in aan kormeerno goobaha tartamayaasha iyo horumarinta istiraatiijiyada ganacsiga cusub iyo istiraatiijiyada suuqgeynta.
3. Aalad weyn oo lagu qabto hawlaha kala duwan:
Kala soocista caawinta abuurista goobaha sarrifka cusub, waxay dhistaa barnaamijyada duullimaad duulimaadka, falanqaynaya suuqyada guryaha, kormeerida alaabooyinka, iyo qabtaan hawlo badan oo badan. Xaqiiqdii, waxaad samayn kartaa macdanta macluumaadka iyo hawlaha shabakada ee adeegyadan adeegga iyo helitaanka macluumaadka khaladka ah ee aan xor u laheyn mawduucyada daqiiqadaha.
4. Horumarinta Horumarinta:
Apify's API wuxuu si toos ah u helaa oo u saaraa macluumaadka faa'iido leh adiga. JSON waxaa badanaa loo isticmaalaa habka kaydinta gaadiidka ee u dhaxeeya macmiilka iyo serverka webka. Waxay sidoo kale kuugu soo celineysaa isbedellada suuq-galka ee hadda waxayna bixisaa jawaab-celin ku saabsan tayada xogta. Waxaad isticmaali kartaa xulashada API raadinta si aad u hesho bots good on the internet. Dhageyso xogta shaandhada iyo waxay abuureysaa liisyo gaar ah ee alaabada.
5. Xulashada IP-ga kala duwan:
Mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee Apify waa in ay bixiyaan fursado kala duwan oo IP ah. Waxaad ubaahan kartaa qorshe xirfadeed oo si qarsoodi ah u shaqeynaya shabakada. Waxaad gali kartaa boqolaal cinwaano IP ah oo gaar ah isla markaana waxay qabtaan hawlo kala-soocid iyo xog-ururin xogeed mar.
6. Isku-soo-dubarid adigoo raacaya barnaamijyada aad jeceshahay:
Si ka duwan sida caadiga ah alaabada webka , Apify ayaa ku xiran kara barnaamijka aad jeceshahay. Waxa kale oo ay faa'iido u leedahay barnaamijyadaa oo waxay ka caawisaa sidii loo hirgelin lahaa loona falanqeyn lahaa natiijooyinka taranka. Iyadoo Apify, waxaad ka heli kartaa aragtida bogagga shabakadaha oo waxaadna heli kartaa ogeysiisyo. Waxaad ka soo dejisan kartaa app ka mid ah casrigaaga oo aad hawlahaaga qabato wakhti kasta iyo meel kasta.
7. Tilmaamo buuxa:
Waa inaad u sheegtaa waxa aad rabto inaad ku riixdo ama ku xoqdo, Apify wuxuu qaban doonaa shaqadiisa si toos ah. Adeeggan, waxaad ka soo saari kartaa boggaga internetka iyo blogyada leh cookies, redirects, iyo AJAX. Uma baahnid inaad rakibatid plugin-ku-saleysan shabakad. Dhageysiintu waa beddel wanaagsan oo lagu soo dejiyo. io, Octoparse, Uipath, Screen Scraper iyo Kimono Labs.